Kpido: geotargeting | Martech Zone
Azụmaahịa Dabere na Ọnọdụ: Geo-Fencing na Beacons
Mgbe m nọ na IRCE na Chicago, agwara m ụlọ ọrụ kọwaara m nyiwe ha nke mere ka ndị ahịa na ndị na-emekọrịta ihe n'ịntanetị na ndị na-adịghị n'ịntanetị. Nke a bụ ihe atụ: walk na-abanye n'ime ụlọ ahịa azụmaahịa kachasị amasị gị. Ozugbo ị banyere n'ọnụ ụzọ, onye na-ere ahịa ahụ kelee gị aha, tụlee ngwaahịa ị na-eme nyocha n'isi ụtụtụ na Internetntanetị, wee gosi gị ụfọdụ ngwaahịa ndị ọzọ ị nwere ike ịmasị
El Toro: Mgbasa ozi ezubere iche maka IP, Mgbasa Ozi Geographic Cookieless
Monday, March 12, 2018 Wenezdee, Machị 14, 2018 Douglas Karr
Anyị gbara Marty Meyer ajụjụ ọnụ n'oge na-adịbeghị anya na ọkwa mgbasa ozi ya dị egwu, El Toro. Maka ụlọ ọrụ ọ bụla emeela mkpọsa geotargeted, ị maara etu usoro a siri sie ike. Adreesị IP na-agbanwe agbanwe, ma ikwenye na ha ziri ezi bụ nnukwu nsogbu. Nke ahụ bụ ihe ikike teknụzụ El Toro nwere ikike, patent na-echere ndị ahịa ya. Ihe ọ bụla nke El Toro IP na-enweta na ọgụgụ isi sitere na algorithm Targeting nke na-akpata ọgba aghara na ụlọ ọrụ ahụ. Ebe a
40Nuggets: Tinye ma tọghata na-enweghị ndị ọbịa iwe
Satọde, Ọgọstụ 15, 2015 Douglas Karr
Enwere ọtụtụ ngwaọrụ dị na ahịa iji nyere gị aka ịbawanye ntụgharị - gụnyere ụdị ntinye aha popup, ụdị ebumnuche ọpụpụ, ibe ọdịda ezubere iche, nkata ntanetị, na ụdị ndebanye. Ọ bụrụ na ị na-etinye nke ọ bụla n'ime ha, enwere ohere na ị na-atụba onye ọbịa gị karịa ị na-enyere ha aka ịme nzọụkwụ ọzọ na ụzọ ntụgharị ha. 40Nuggets na enye gi ohere ichikota atumatu a n'otu uzo di omimi na ntughari. Ikpo okwu na-enye ohere
Brand.net: Nkenke Geographic na Mgbasa Ozi Ngosipụta Nke Ngosiputa
Fraịde, Jenụwarị 17, 2014 Saturday, January 14, 2017 Douglas Karr
Nyaahụ ka mụ na ezigbo enyi m na-eri nri ehihie Troy Bruinsma, onye isi na-ere ahịa na azụmaahịa. Afọ ole na ole gara aga, anyị rụrụ ọrụ na mkpọsa ozi maka Troy ozugbo ọ rụrụ ọrụ na ụlọ ọrụ USB. N'iji nhicha data, data ndị ahịa ya, data ndenye aha ha, data igwe mmadụ na TON nke ọrụ… anyị nwere ike ịkọwa ndị ahịa ha ugbu a ma chọpụta, site n'ezinaụlọ, ndị ezinụlọ nwere ike ịdenye aha nchịkọta USB ụfọdụ ma ọ bụ